Mohaammad Saalaah - taphataa Masrii fi Liivarpuul eenyu? - BBC News Afaan Oromoo
Mohaammad Saalaah - taphataa Masrii fi Liivarpuul eenyu?
Goodayyaa suuraa Mohaammad Saalaah 2008 as taphataa Masrii badhaasa BBC injifate ta'uuf kaadhimamtoota xumuraa shan keessaa tokko dha
Mohaammad Saalaah galchiiwwan dhibba hedduu lakkoofsiseera ta'uu mala, garuu Masrii keessatti galchii tokkittiidhaan bara baraan yaadatama. Galchiin sunis kan Koongoo irratti gulaallii waancaa adduunyaaf yoo taphatan lakkoofsiseefi kurmaana jaarraa booda Fara'oonota waancaa adduunyaaf dabarsite dha.
Masriin yeroo 7 waancaa afriikaa moo'uun riikoordii qabaattus bara 1990 booda waltajjii adduunyaa irratti hirmaattee hin beektu, tapha Koongoo irrattis wayita qabxiin 1-1 walqixa turetti rukuttaa peenaalitii daqiiqaa dhumaa irratti argame gara galchiitti jijjiiruun dirree fi dirreen ala lammiilee jiran gammachuudhaan iyyisiise.
Dhiibbaa fi hawwii cimaa lammiilee miiliyoona 80 irraa mul'achaa tureen osoo hin na'in tasgabbii fi xiyyeeffannoodhaan galchii sana lakkoofsisuun isaa pireezidantii biyyattii Abdulfattaah Al-Sisi irraa osoo hin hafin dinqisiifannaa argamsiiseeraaf.
Biyya isaa Masrii waggoota 25 booda waancaa adduunyaaf kan dabarse
Galchiin sun mootii Fara'oonotaa 2017 ta'ee akka itti fufuuf bu'uura cimaa ta'eefi. Gareen sunis maqaa masoo 'Masrii Saalaah' jedhamuun akka waamamus taasise, galanni nama saffisaa fi garee hanqina qabu kakaasuun qbxii galmeessisuuf haa ta'uutii.
Fakkeenyaan kaa'uuf, galchiiwwan 7 Masriin gara Waancaa Adduunyaa Raashiyaatti dabarsan keessaa Saalaah 5 lakkoofsiseera.
Waancaa Afriikaa irrattis haaluma wal fakkaatuun sochii bareedaa taasisee galchiiwwan 5 lakkaa'aman keessaa 4 irratti hirmaatee ture 2 lakkoofsisuun kaan ammoo kennuun. Kunis filannoo garee cimaa dorggommichaa keessa akka galuu isa taasise. Gareen Afriikaa kaabaa Masriin xumuraaf ga'uun Kaameeruuniin injifatamullee.
Taphataan cimaa Masrii kun tapha garee biyyaalessaa irratti qofa hin daangofne, kilaboota isaa Roomaa fi Liivarpuul keessattis galchii omishaa ture.
Erga Liivarpuuliin Waxabajjii darbetti makatee booda sochii bareedaa ta'e taasisuun taphataa cima kilabichaa kan ji'oota Hagayyaa fi Fulbaanaa ta'uu danda'eera.
Galchiin tapha jalqabaa irratti lakkoofsise akka taphoota Piriimeer Liigii 11 irratti galchii 7 qabaatuuf isa yoo gargaaran, taphataan abbaa dandeettii addaa kun Chaampiyoons Liigii keessattis kan gulaallii dabalatee taphoota 6 irratti galchii 5 lakkoofsisuu danda'ee jira.
Jalqabbiin bareedaa kun sochii Roomaatti taasisaa turerraa kan itti fufe yoo ta'u, Roomaan waggoota 7 keessatti sadarkaa gaarii qabatee akka xumuruuf taphattoota gargaaran keessaa Saalaah shoora guddaa qaba.
Roomaan Juuveentuus irraa qabxii 4 qofaan boodatti hafee 2ffaa ta'uun yoo xumuru Saalaah liigii maqaasaa ol-qabe kana keessatti galchii 15 lakkoofsisuun 11 ammoo akka lakkaa'amaniif mijeessee kennee ture.
Tiyeerii Heenirii dhaan 'adda' kan jedhame Saalah, kaadhimummaa badhaasa BBc kana gonfatee 2008 booda taphataa Masrii jalqabaa Mohaammad Abutariikaatti aanee injifate ta'uu danda'aa laata?